China Mvura kudhinda kudhinda kwepurasitiki zvigadzirwa Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Kutumira kwekurapa kwepamusoro kurapwa
Kudhinda kwemvura kudhinda inzira yekurapa yemvura inoshandisa kumanikidza kwemvura uye activator kupukuta uye kuendesa iyo yekufukunura dura pane yekufambisa mvura inotakura firimu kune yakasimba nzvimbo. Zvishandiso zvinoshanda: zvikamu zvepamusoro zvakagadzirwa nepurasitiki, simbi, huni, zvigadzirwa, rabha, nezvimwe.
Kudhinda kwemvura kudhinda pamusoro pezvigadzirwa zvepurasitiki inzira yakasarudzika yepamusoro yekushongedza. Inonyanya kushandiswa kumeso kushongedzwa kwepurasitiki zvigadzirwa, pamwe neyakagadzirwa ne ceramic uye zvigadzirwa zvehuni.
Chii chinonzi kudhinda kweMvura
Kudhinda kwemvura kudhinda inonziwo hydrographics kana hydroGraphics, inozivikanwawo seyekunyudza kudhinda, kudhinda kwemvura kudhinda, kufungidzira kwemvura, kunyudza mvura, kunyorova kwemvura kana kudhinda cubic, inzira yekushandisa kudhizaina dhizaini kumatatu-eenzvimbo. Iyo hydrographic maitiro inogona kushandiswa pane simbi, plastiki, girazi, yakaoma huni, uye zvimwe zvakasiyana zvinhu.
Mvura yekudhinda michina yekudhinda mhando yemhando yekudhinda inoshandisa kumanikidza kwemvura ku hydrolyze iyo yekuchinjisa mapepa / epurasitiki firimu ine mavara mapatani. Nekuvandudzwa kwechigadzirwa kurongedza uye kushongedza zvinodiwa, iko kushandiswa kwekutamisa kwemvura kudhinda kuri kuwedzera uye kuwanda. Yayo isina kunangana yekudhinda musimboti uye yakakwana kudhinda maitiro kugadzirisa matambudziko mazhinji echigadzirwa pamusoro pekushongedza, anonyanya kushandiswa kuchinjisa kudhinda kwemhando dzakasiyana siyana dzekeramiki, girazi ruva pepa uye zvichingodaro.
Kudhinda kwekudhinda kune maviri akakosha maitiro: imwe ndeyekuti haina kuganhurirwa nechimiro chechigadzirwa, kunyanya chakaomarara kana nzvimbo hombe, yakakura-refu, yakakura-yakafara zvigadzirwa zvinogona zvakare kuve zvakashongedzwa.
Zvigadzirwa zvepurasitiki zvine kudhinda kwemvura kudhinda
Mhando dzekudhindisa mvura
Kune maviri marudzi ehunyanzvi hwekufambisa mvura, imwe inoratidzira pateni dhizaini, imwe yacho cubic kuchinjisa.
Iyo yekutanga inonyanya kupedzisa kuchinjiswa kwemavara uye mapikicha mapatani, nepo ekupedzisira achitarisira kupedzisa kuchinjisa pane yese chigadzirwa pamusoro.
Kutamisa kweCubic kunoshandisa iyo yemvura-yakavakirwa firimu iyo iri nyore kunyungudika mumvura kutakura mifananidzo uye zvinyorwa. Nekuda kwekukakavadzana kwakanakisa kwemvura inovhara firimu, zviri nyore kumhepo pamusoro peichi chigadzirwa kugadzira graphic layer, uye icho chigadzirwa pamusoro chinogona kuwana chitarisiko chakangofanana nependi yekupfira. Drape pane chero chimiro cheiyo workpiece kugadzirisa dambudziko rematatu-mativi chigadzirwa kudhinda kune vagadziri.
Iyo yakafukidzwa yepamusoro yekufukidza inogona zvakare kuwedzera mitsara dzakasiyana pane chigadzirwa pamusoro, senge dehwe, huni, emaradhi uye marble mitsara, nezvimwewo, uye inogona zvakare kudzivirira iyo nzvimbo inowanzoonekwa mune yakajairwa dhizaini yekudhinda. Mukudhinda kwacho, nekuti icho chigadzirwa chepamusoro hachidi kutaurirana nefirimu yekudhinda, inogona kudzivirira kukuvadza chigadzirwa chepamusoro uye kuvimbika kwayo.
Maitiro ekudhinda kwemvura kudhinda pane zvigadzirwa zvepurasitiki
Mukuita, substrate chidimbu chinofanira kuprindwa kutanga chinoenda kuburikidza neese pendi maitiro: kugadzirira kwepamusoro, priming, kupenda, uye kujekesa kwakajeka. Mushure mekupenda asi usati wajeka kujekesa, chikamu chacho chagadzirira kugadziriswa. Iyo polyvinyl doro hydrographic firimu, iyo yakadhirowewa-yakadhindwa nemufananidzo wakajeka kuti uiswe, yakanyatsoiswa pamusoro pemvura mutangi yekunyudza. Iyo yakajeka firimu inogadziriswa nemvura, uye inonyungudika mushure mekushandisa iyo activator mhinduro. Kamwe kudhiza kwatanga, kumisidzana kwepamusoro pemvura kunobvumira iyo pateni kutenderera yakatenderedza chero chimiro. Chero zvasara zvinosara zvobva zvashambidzwa zvakakwana. Ingi yatonamatira uye haichashamba. Inobva yatenderwa kuoma.
Iko kunamatira ndiko kukonzeresa kwemakemikari ezvinhu emumugadziri kupfavisa hwaro hwejasi uye kubvumira inki kuti iumbe chisungo nayo. Chimwe chezvikonzero zvakajairika chekutadza kuzadzisa kunamatira pakati pezvikamu zviviri ianoshanda zvisina simba activator. Izvi zvinogona kuve zvakawandisa activator kuiswa kana kushoma.
Imwe yacho ndeyekuti iyo tekinoroji inoshamwaridzika zvakatipoteredza. Tsvina nemvura yakasviba hazvizosvibisa nharaunda.
kunyudza zvikamu zvepurasitiki mumvura yekudhinda yekuchinjisa mvura
Kudhinda kwemvura kudhinda mudziva
Bvisa zvikamu kubva mudziva mushure mekushambadzirwa kwemvura
Zvakanakira kudhinda kwemvura kudhinda
(1) Runako: Unogona kuendesa chero echisikigo mitsara uye mapikicha, mifananidzo uye mafaera pane icho chigadzirwa, kuitira kuti chigadzirwa chive nechakada nzvimbo yemavara. Iyo ine yakasimba kunamatira uye yakazara aesthetics.
(2) Kugadziridza: Mvura yekudhinda michina yekudhinda inogona kukunda matambudziko echimiro chakaomarara uye kona yakafa iyo isingagone kuburitswa neyechinyakare kudhinda uye kupisa kupisa, kuchinjisa kudhinda, kudhinda kwechidzitiro uye kupenda kwepamusoro.
(3) Kuwedzera: Inokodzera kudhinda pamusoro pehardware, plastiki, dehwe, girazi, ceramics, huni uye zvimwe zvigadzirwa (jira uye bepa hazvishande). Nekuda kwerunako rwayo, rwepasirese uye nekuvandudza, ine iro rakakosha basa rakawedzerwa kune zvakagadziriswa zvigadzirwa. Inogona kuiswa pakushongedzwa kwemusha, mota, kushongedzwa uye mimwe minda, uye ine akasiyana mapatani, uye inogona kushandiswa nemimwe mhedzisiro.
(4) kuita zvemunhu: chero chaunoda, ini ndinozvigadzira, uye chero pateni ichave yakagadzirirwa newe.
(5) Kubudirira: hapana kugadzirwa kweplate, kudhirowa, kudhinda nekukurumidza kudhinda (maitiro ese anogona kupedzwa mumaminitsi makumi matatu, chiratidzo chakakodzera kwazvo).
(6) Zvakanakira: Kurumidza proofing, kudhinda kwepamusoro, pendi yemunhu uye isiri-pepa uye kudhinda kwemachira ane akawanda madiki mapatani.
(7) michina iri nyore. Izvo zvinogona kuitwa pane akawanda maficha asiri anoenderana neakanyanya tembiricha. Iko hakuna kudikanwa kwechimiro chechinhu chakatamisirwa.
Kukanganisa kwekudhindisa kwemvura
Mvura yekudhinda tekinoroji kudhinda ine zvakare kukwana.
(1) Kutamisa mifananidzo uye zvinyorwa zviri nyore kuremara, zvinoenderana nechimiro chechigadzirwa uye nemhando yemvura yekuchinjisa firimu pachayo. Panguva imwecheteyo, mutengo wakakwira, zvakanyanya kuomesesa maitiro, iwo mutengo wakakwira.
(2) Mari yakakwira yezvinhu uye mutengo wevashandi.
Kushandiswa kwemvura yekudhinda kudhinda
Zvemotokari zvikamu: dhibhodhi, pani yekudzora, pepa tauro ndiro, tii mukombe chigaro, tepi rack, kumashure kwekuona girazi furemu, mashandiro ekubata, nezvimwe.
Zvigadzirwa zvemagetsi: runhare, pager, vhidhiyo rekodhi, odhiyo, kure kure, mbeva, wachi, keyboard, kamera, hairdryer, nezvimwe.
Zvinhu zvekurara: sofa, tafura yekofi, kabhineti, chandelier, ashtray, vase, kuratidza midziyo, nezvimwe.
Mazuva ese-shandisa zvigadzirwa: bhokisi kurongedza zvishongedzo, tafura yemidziyo, girazi bhokisi, chinyoreso, chinyoreso chinomira, kalendari mira, hunyanzvi furemu, roketi, kushongedza bvudzi, cosmetic peni, cosmetic bhokisi, nezvimwe.
Zvivakwa zvemukati: madhoo nemahwindo, pasi, madziro emadziro, nezvimwe.
Mestech inonyanya kugadzirisa zvikamu zvepurasitiki uye kudhinda mvura kudhinda nekugadzirisa masevhisi. Ndapota taura nesu.
Pashure: Motokari epurasitiki zvikamu
Zvadaro: Kwatinoshandisa epurasitiki zvikamu
Mapurasitiki ekushandisa mabhokisi